घर बनाउने धेरैकाे राेजाइमा परेकाे नेपाली ढाेका टिम्बर क्राफ-| Most Popular Nepali Door Timber Craft Skin Door in Nepal Markets . - Timber Craft
घर बनाउने धेरैकाे राेजाइमा परेकाे नेपाली ढाेका टिम्बर क्राफ-| Most Popular Nepali Door Timber Craft Skin Door in Nepal Markets .
टिम्बर क्राफ्टको ढोका ग्राहकले मन पराएरै बजार माग धान्न धौ धौ परेको छ चुणाध्वज थापा,
सेल्स मेनेजर –
टिम्बर क्राफ्ट म विगत साढे २ वर्ष देखि टिम्बर क्राफ्टसँग जोडिएको छु । कोरोनाको माहामारीले समग्र विश्व प्रभावित भएको थियो, तयसको असर हामीलाई नपर्ने त कुरै भएन ।
अहिले भने टिम्बर क्राफ्टको बजार निकै बढेको छ । वजार व्यवस्थापनमा पनि निकै खटिएका छौं । कोरोनाको समयमा बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थमा केहि ढिलाईले गर्दा केहि प्रभावित भएको थियो ।
तर अहिले सम्रग बजार लयमा फर्किसकेको छ । हामीकहाँ धेरै जसो त आफूबस्नको लागि बनाएको घरको लागि ढोका खोज्न आउनुहुन्छ । घर बनाएर अरुलाई बेच्ने खालका ग्राहक पनि आउनुहुन्छ ।
आफू बस्नको लागि घर बनाएका ग्राहकले एकदमै मन पराउनु हुन्छ, भने बेच्नको लागि घर बनाउनेहरु पनि यहाँ आइसकेपछि रित्तै हात फर्किनुहुन्न ।
किनकी अनलाईनमा हेरेर अथवा अरुले भनेको भरमा ढोका खोज्दै आउनु भएको ग्राहकले यहाँ आइसकेपछि प्रत्यक्ष ढोका हेर्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष हेरि तथा बुझिसकेपछि
हाम्रो ढोका प्रति झन विश्वास गर्नुहुन्छ र रित्तै फर्किने त कुरै भएन । अहिले समय परिवर्तन भइसकेको छ । विगतमा राम्रो भए नि नराम्रो भएनि एउटै मात्र प्रयोग गर्थे विकल्प थिएन ।
तर अहिले त प्रतिष्प्रर्धात्मक बजार भएकोले बजारमा थुप्रै विकल्प छन् । ती थुप्रै विकल्प मध्येको उत्तम विकल्प नेपाली स्किन डोर नै भएकोले यहाँ आइसकेका ग्राहक ढोका लिएरै जानुहुन्छ ।
टिम्बर क्राफ्टका ढोकाहरुमा १० वर्षे रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी दिएका छौं ।
किरा नलाग्ने, आफ्नो इच्छ्या अनुसार रङ लगाउन मिल्ने,
वाथरुम वा कौशीमा समेत लगाउन मिल्ने
भएपछि यो ढोका प्रति ग्राहकको रोजाइ बढेको हो ।
यो ढोकामा एउटा रंङ लगाए पछि अर्को रंङ लगाउछु भन्न पनि पाइयो ।
नेपालमै बनेको भएर पनि धेरैजसो ग्राहकले नेपाली ढोका नै प्रयोग गर्छु भन्नुहुन्छ ।
टिम्बर क्राफ्टका ढोकाहरुमा १० वर्षे रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी दिएका छौं ।किरा नलाग्ने, आफ्नो इच्छ्या अनुसार रङ लगाउन मिल्ने,वाथरुम वा कौशीमा समेत लगाउन मिल्ने
भएपछि यो ढोका प्रति ग्राहकको रोजाइ बढेको हो ।यो ढोकामा एउटा रंङ लगाए पछि अर्को रंङ लगाउछु भन्न पनि पाइयो ।
नेपालमै बनेको भएर पनि धेरैजसो ग्राहकले नेपाली ढोका नै प्रयोग गर्छु भन्नुहुन्छ ।यहाँ आइसकेपछि ग्राहक हेरेर मात्र फर्किने खासै छैनन्, ९० प्रतिशतले आइसकेपछि ढोका लिएरै जानुहुन्छ ।
किनकी अहिले जति पनि ग्राहक आउनुहुन्छ कुनै न कुनै माध्यमबाट केहि न केहि जानकारी पाएरै आउनुहुन्छ । यस्ता जानकारी दिने माध्यमहरुमा सामाजिक सञ्जाल, वेभसाइट तथा नजिकको छिमेकी र विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ समेत हुन् ।
जसले राम्रो ढोकाबारे जानकारी गराउनुहुन्छ । हाम्रो ढोका प्रयोग गरिसकेका ग्राह पनि निकै सुखि हुुनुहुन्छ । हाम्रा ग्राहक खुसि भएकै कारण बजार माग धान्न धौ धौ परिरहेको अवस्था छ ।
टिम्बर क्राफ्टका स्किन नेपाली ढोकाको अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारप्रसार तथा माकर्केटिङ नै हाम्रा पुराना ग्राहकहरु ले नै गरिदिनुभएको छ । हामीसँग रङ नगरिकन आउने ढोका भनेको गोल्डेन प्राइमरमा हो । हामी यतै पनि ढोकामा कलर गरिदिन्छौं ।
साइजको हिसाबमा भन्ने हो भने औषतमा प्रयोग हुने साइज नै बढि जान्छ । ग्राहक आफैले आफ्नो साइज अर्डर गर्न पनि सक्नुहुन्छ । हामीसँग भएका ढोकामा चारवटा बुट्टा भएकोलाई फोर प्यानल, ६ वठा बुट्टा भएको लाई ६ प्यानल भन्निछ ।
विग्रिने ढोका १/२ वर्षमै विग्रिने भएकोले यो ढोका १० पछि विग्रिन्छ नै भनेर नसोच्न र घर रहुन्जेल रहन्छ भन्ने सोच बनाउन मेरो व्याक्तिगत अनुरोध छ ।
‘नेपाली ढोका नेपाली उत्पादनलाई माया गरौं, नेपाली हुनुमा गर्व गरौं ।’ (टिम्बर क्राफ्टका सेल्स मेनेजरसँग केशव भट्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)